Horudhac: Manchester City vs Liverpool… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka ku guuleystayaasha Premier League ay booqanayaan Etihad) – Gool FM
(Manchester) 02 Luuliyo 2020. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa iyadoo haysata horyaalka Premier League, waxa ay caawa booqanaysaa garoonka Etihad, halkaasoo ay kula ciyaari dooonto naadiga Manchester City.
Kooxda uu hoggaamiyo macallin Pep Guardiola ayaa la filayaa inay saf u geli doonaan oo ay sacab ku soo dhoweyn doonaan Liverpool marka ay garoonka soo gelayaan, maadaama ay kulamo harsan horyaalka ku guuleysteen.
Manchester City ayaan heli doonin adeegga Fernandinho, kaasoo ganaaxan ayna waajib tahay inuu soo dhammaysto labo kulan oo ganaax ah.
Sergio Aguero ayaa garoomada ka maqnaan doona inta ka harsan xilli ciyaareedkan, halka Eric Garcia uu markale maqnaan karo maadaama uu dhaawac ka soo gaaray kulankii ay wajaheen Arsenal.
Dhinaca kale daafaca Liverpool ee Joel Matip ayaa garoomada seegi doona inta harsan xilli ciyaareedkan kaddib dhaawac cagta ka soo gaaray.
James Milner ayaa ku soo laabtay tababarka kaddib dhaawac muruqa ah oo sababay inuu seego kulankii Crystal Palace.
>- Manchester City ayaa isku deyeysa inay badiso saddex kulan oo isku xigta oo horyaalka ah oo ay garoonkooda kaga horyimaadeen Liverpool markii ugu horreysay tan iyo 1937-kii.
>- Guushii Reds kaliya 10-kii kulan ee ugu danbeeyay ee ay ku ciyaareen Etihad Stadium waxa ay aheyd kulankii ugu horreysay ee Jurgen Klopp oo macallin u ah Liverpool uu wajahay Man City bishii November ee sanadkii 2015-kii.
>- Kooxda Liverpool ayaa raadinaysa inay Man City hore iyo gadaal u marto ama minin iyo marti uga adkaato horyaalka Premier League kaliya markii saddexaad.
>- Man City ayaa haatan lumisay 30-dhibcood, waana in ka badan dhibcihii ay lumisay wadar ahaa labadii xilli ciyaareed ee kan ka horreeyey.
>- Kani waa kal ciyaareedkii saddexaad 11 xilli ciyaareed oo uu tababare ahaa Pep Guardiola oo uusan horyaalka ku guuleysan.
>- Iyadoo todoba kulan ay harsan tahay ayay kooxda Liverpool ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska waana kooxdii ugu horreysay taariikhda ee sidaasi sameysa.
>- Reds waxay u baahan tahay 15 dhibcood 21 dhibcood oo ay ka heli karto todobada kulan ee u harsan horyaalka si ay u jabiso rikoorka dhibcaha ugu badan ee horyaalka ingiriiska lagu qaaday oo ah 100-dhibcood oo ay dhigtay kooxda Man City kal ciyaareedkii 2017-18.
>- Reds waxay gool la’aan noqon karaan kulankoodii shanaad oo xiriir ah dhammaan tartammada, kulamada ay bannaanka garoonkooda ku ciyaarayaan markii ugu horreysay tan iyo xukunkii Graeme Sounessoo oo ay siddeed kulan oo xiriir ah gool ku soo dhalin kari waayeen bannaanka tartammada oo dhan intii u dhexeysay Febraayo illaa Abril sanadkii 1992-kii.